Tratran’ny sakana ara-pahasalamana teo Sakaraha ilay fiara saingy efa maty ilay narary vao 28 taona. Tonga nanao fizahana sy fanamarinana izany moa ny avy eo anivon’ny foibem-pibaikoana momban’ny aretina COVID 19 na CCO Sakaraha. Araka ny toromariky ny CCO Toliara kosa dia na miverina aty Antananarivo ny razana na milevina ao Sakaraha fa tsy mahazo miditra an’I Toliara. Ireo mpandeha kosa dia mitodi-toha aty Antananarivo avokoa. Nalevina tao Sakaraha ihany moa ny razana ary ireo mpandeha kosa dia naterin’ny mpitandro filaminana aty Antananarivo. Nilaza ny fianakavian’ny maty fa mosavy nataon’olona no nahazo ny havan’izy ireo fa tsy COVID 19 akory, hoy hatrany ny fampitam-baovao voaray.